ပေါင် မြို့ ထန်း ပင် ချောင် လေး ကျေး ရွာ တွင် ရက် စက် စွာ က လေး အား နွံ ထဲ နှစ် သတ်စွန့် ပစ် မှု ဖြစ် ပွား •
ပေါင် မြို့ ထန်း ပင် ချောင် လေး ကျေး ရွာ တွင် ရက် စက် စွာ က လေး အား နွံ ထဲ နှစ် သတ်စွန့် ပစ် မှု ဖြစ် ပွား
23/06/2019 Yan Naing ပြည်တွင်းသတင်း 0
ဘယ် လို ဝဠ် ကြွေး တွေ များ ပါ ခဲ့ လို့ ပေး ဆပ် နေ ရ တာ လဲ ခ လေး ရယ် … စိတ် မ ကောင်းလိုက် တာ … ဝဠ် ကြွေး ရှိ သ မျှ ဒီ ဘ ဝ ဒီ မျှ နဲ့ ပဲ ကြေ ပါ စေ လို့ ဆု တောင်း ပေး ပါ တယ်ကွယ် ….
ဖြစ် စဉ် အ ကျဉ်း ။ ။
ပေါင် မြို့ ထန်း ပင် ချောင် လေး ကျေး ရွာ တွင် ရက် စက် စွာ က လေး အား နွံ ထဲ နှစ် သတ်စွန့် ပစ် မှု ဖြစ် ပွား ခဲ့ ကြောင်း သိ ရ သည် …. ။
ပေါင် မြို့ ဇွန် ၂၂ ။
မွန် ပြည် နယ် ပေါင် မြို့ ထန်း ပင် ချောင် လေး ကျေး ရွာ ခ ရွတ် ချောင်း နွံ ထဲ နှစ် သတ် စွန့် ပစ် ထား ခဲ့ သော ၁ နှစ် ကျော် က လေး တစ် ဦး ( မိန်း က လေး ) အား ကျေး ရွာ အုပ် ချုပ် ရေး အ ဖွဲ့ မှ ပေါင် မြို့ ပြည် သူ့ ဆေး ရုံ ကြီး သို့ ပို့ ဆောင် ပေး ပြီး.က လေး အား မော် လ မြိုင် က လေးဆေး ရုံ ကြီး သို့ စိ တ္တ သု ခ လူ မူ ကူ ညီ ရေး အ သင်း ပေါင် မြို့ မှ ပို့ ဆောင် ကူ ညီ ပေး ခဲ့ပါ သည် ….. ။
စိ တ္တ သု ခ အ သင်း ချိတ် ဆက် မှု ဖြစ် ( ရင် ခွင် မဲ့ စောင့် ရှောက် ရေး အ သင်း )
ပြည် နယ် ဥ က္က ဌ ဒေါ် သီ သီ နွယ် နှင့် မော် လ မြိုင် ခ ရိုင် ဥ က္က ဌ မ သော် တာ တို့ မှ ဆေး ရုံတွင် ကြို စောင့် နေ ပြီး လို အပ် သည် များ ကူ ညီ ဆောင် ရွက် ပေး ခဲ့ ပါ သည် …. ။ အ ခု ဖြစ် စဉ် အား ပြည် နယ် လူ မူ ဝန် ထမ်း ဦး စီး ဌာ န သို့ သ တင်း ပို့ ချိတ် ဆက် ဆောင် ရွက် ပေး ပြီးပေါင် မြို့ ရဲ တပ် ဖွဲ့ နှင့် ထန်း ပင် ချောင် လေး ကျေး ရွာ အုပ် ချုပ် ရေး မှူး တို့ မှ စွန့် ပစ် သွားသည့် မိ ခင် အား လိုက် လံ ရှာ ဖွေ အ ရေး ယူ နိင် ရန် ဆောင် ရွက် နေ ပါ သည်…. ။
C red i t > > # B o w i n
ပေါငျ မွို့ ထနျး ပငျ ခြောငျ လေး ကြေး ရှာ တှငျ ရကျ စကျ စှာ က လေး အား နှံ ထဲ နှဈ သတျစှနျ့ ပဈ မှု ဖွဈ ပှား
ဘယျ လို ဝဠျ ကွှေး တှေ မြား ပါ ခဲ့ လို့ ပေး ဆပျ နေ ရ တာ လဲ ခ လေး ရယျ … စိတျ မ ကောငျးလိုကျ တာ … ဝဠျ ကွှေး ရှိ သ မြှ ဒီ ဘ ဝ ဒီ မြှ နဲ့ ပဲ ကွေ ပါ စေ လို့ ဆု တောငျး ပေး ပါ တယျကှယျ ….
ဖွဈ စဉျ အ ကဉျြး ။ ။
ပေါငျ မွို့ ထနျး ပငျ ခြောငျ လေး ကြေး ရှာ တှငျ ရကျ စကျ စှာ က လေး အား နှံ ထဲ နှဈ သတျစှနျ့ ပဈ မှု ဖွဈ ပှား ခဲ့ ကွောငျး သိ ရ သညျ …. ။
ပေါငျ မွို့ ဇှနျ ၂၂ ။
မှနျ ပွညျ နယျ ပေါငျ မွို့ ထနျး ပငျ ခြောငျ လေး ကြေး ရှာ ခ ရှတျ ခြောငျး နှံ ထဲ နှဈ သတျ စှနျ့ ပဈ ထား ခဲ့ သော ၁ နှဈ ကြျော က လေး တဈ ဦး ( မိနျး က လေး ) အား ကြေး ရှာ အုပျ ခြုပျ ရေး အ ဖှဲ့ မှ ပေါငျ မွို့ ပွညျ သူ့ ဆေး ရုံ ကွီး သို့ ပို့ ဆောငျ ပေး ပွီး.က လေး အား မျော လ မွိုငျ က လေးဆေး ရုံ ကွီး သို့ စိ တ်တ သု ခ လူ မူ ကူ ညီ ရေး အ သငျး ပေါငျ မွို့ မှ ပို့ ဆောငျ ကူ ညီ ပေး ခဲ့ပါ သညျ ….. ။
စိ တ်တ သု ခ အ သငျး ခြိတျ ဆကျ မှု ဖွဈ ( ရငျ ခှငျ မဲ့ စောငျ့ ရှောကျ ရေး အ သငျး )
ပွညျ နယျ ဥ က်က ဌ ဒျေါ သီ သီ နှယျ နှငျ့ မျော လ မွိုငျ ခ ရိုငျ ဥ က်က ဌ မ သျော တာ တို့ မှ ဆေး ရုံတှငျ ကွို စောငျ့ နေ ပွီး လို အပျ သညျ မြား ကူ ညီ ဆောငျ ရှကျ ပေး ခဲ့ ပါ သညျ …. ။ အ ခု ဖွဈ စဉျ အား ပွညျ နယျ လူ မူ ဝနျ ထမျး ဦး စီး ဌာ န သို့ သ တငျး ပို့ ခြိတျ ဆကျ ဆောငျ ရှကျ ပေး ပွီးပေါငျ မွို့ ရဲ တပျ ဖှဲ့ နှငျ့ ထနျး ပငျ ခြောငျ လေး ကြေး ရှာ အုပျ ခြုပျ ရေး မှူး တို့ မှ စှနျ့ ပဈ သှားသညျ့ မိ ခငျ အား လိုကျ လံ ရှာ ဖှေ အ ရေး ယူ နိငျ ရနျ ဆောငျ ရှကျ နေ ပါ သညျ…. ။
ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ဘာတွေလုပ်လဲ ဖတ်ကြည့်ပါ……
Total Hits : 1194228